Mogadishu Journal » Sadio Mane iyo Edouard Mendy ayaa ku guuleystay abaal-marinaha AFCON
Weeraryahanka Liverpool Sadio Mane ayaa ku guuleystay xiddiga ugu fiican tartanka qaramada Afrika, iyadoo goolhayaha Chelsea Edouard Mendy loo magacaabay goolhayaha ugu fiican ka dib guushii ay ka gaareen Senegal.
Rigoorayaal ay kaga badiyeen Masar ciyaartii finalka ayaa Senegal markii ugu horeysay loo caleemo saaray horyaalnimada Afrika, 20 sano ka dib markii ugu horeysay ee ay ciyaareen finalka 2002 ay ku dhameysteen rigoore wadno xanuun. Libaaxyada Teranga waxay sidoo kale luminayeen finalka 2019 laakiin ugu dambeyntii waxay soo afjareen sugitaankoodii dheeraa.
Mane ayaa tartanka ka dhaliyay saddex gool oo uu ku jiro mid muhiim ah oo heerka Group-yada kaga soo guulaystay Zimbabwe. Waxa uu sidoo kale si kalsooni leh ugu soo baxay rigoorada muhiimka ah ee rigoorada, isagoo muujiyay geesinimo inuu sidaas sameeyo ka dib markii uu goobta ka waayay goor hore oo caadi ah.
Dhanka kale Mendy ayaa shabaqiisa ilaashaday shan kulan todobadii kulan ee uu ciyaaray intii uu socday tartanka. Waxa uu sidoo kale badbaadiyay rigoore dhamaadkii Egypt rigoore taasoo si toos ah u dhigay in Mane uu markaas ku guuleysto.
Labada ciyaaryahanba waxa ay heleen koobabkooda gaarka ah final-kii ka dib isaga oo ay wehliyaan xiddiga Cameroon Vincent Aboubakar, kaasoo la guddoonsiiyay abaal-marin ah gooldhaliyaha ugu sarreeya tartanka.
Subaxnimadii isniinta, Mane waxa uu baraha bulshada soo dhigay sawir isaga oo bilada ku guulaysta luqunta kaga xidhan yahay, isaga oo la soo toosay koobka AFCON oo sariirta agtiisa yaal.